Malta waxay dib u habayn ku samaysaa siyaasada xashiishada waxayna dajisaa heerar wanagsan Yurub • Daroogada Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Malta waxay dib u habayn ku samaysaa siyaasadda xashiishadda waxayna dejisaa heer wanaagsan Yurub
albaabka Ties Inc. February 9 2022
maqaal by Ties Inc. February 9 2022
Xeerarka cusub ee xashiishka ee Malta waa in ay tusaale u noqdaan dawladaha kale ee Yurub si ay u joojiyaan cadaadiska aan loo baahnayn ee isticmaalayaasha maandooriyaha fudud oo ay dhabar jab ku noqdaan dambiyada abaabulan, sida uu sheegay wasiirka sharciga Owen Bonnici.
Bonnici, wasiirkii hore ee caddaaladda, haddana ah wasiirka sinnaanta, cilmi-baarista iyo hal-abuurka, ayaa u sheegay Euronews in sharciga cusub ee uu ansixiyay baarlamaanka Malta bishii December 2021, uu ka hortagayo isticmaalayaasha madadaalada in lagu dacweeyo haynta xashiishadda yar yar.
1 Sharciga xashiishadda cusub
2 Xashiishka Yurub
Sharciga xashiishadda cusub
Kan cusub qoyan Waxay u sahlaysaa isticmaalayaasha iyo ugu dambeyntii ururada aan faa'iido doonka ahayn inay koraan oo ay u qaybiyaan dhirta xashiishadda iyada oo loo marayo ururo, taasoo la macno ah isticmaalayaashu maaha inay daawada ku iibsadaan suuqa madow. Sharciga Malta waxa uu u ogolyahay isticmaalayaasha in ay sidda todobo garaam aragti ahaan oo ay ilaa 50 garaam guriga ku hayaan.
Hogaamiyaha Jarmalka Olof Scholz ayaa taageersan sharciyeynta, laakiin dowladda cusub ee dalka ma aysan cayimin waqti xaddidan oo dib u habeyn ah. In kasta oo Nederlaan ay caan ku tahay helitaankeeda, haddana waa sharci-darro in shakhsiyaadku iibiyaan ama haystaan. Goobaha lagu qaxweeyo ee shatiga u haysta in ay iibiyaan waa in ay alaabtooda ku iibsadaan suuq madow, taas oo dhiirigelisa dambiilayaasha.
Tiro ka mid ah dawladaha Yurub, oo ay ku jiraan Talyaaniga, Spain, Belgium iyo Ireland, ayaa baabi'iyay xukunnada xashiishadda, laakiin 14 ka mid ah 28-ka dawladood ee Yurub - oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Austria - haysashada xashiishadda yaryar ayaa weli horseedi karta xabsi u horseeda.
Xitaa gobolada Yurub ee xashiishadda laga saaray - taasoo la macno ah kuwa lagu qabto xaddi yar oo badeecada ah lama xidhi doono - isticmaalayaashu wali waa inay daawada ka iibsadaan ganacsatada.
"Waa wax aan faa'iido lahayn in la yiraahdo waxaad haysataa shan garaam, laakiin isla markaa ha bixin waddo ammaan ah oo nidaamsan si aad u hesho xashiishad," Bonnici ayaa yidhi "Waa inaad labadaba samaysaa ama waxba samayn. In aan waxba la qaban ma aha ikhtiyaar.”
Bonnici, oo yaraantiisii ​​ay ku dhacday neefta, waligiis ma cabin xashiishadda, laakiin ka hor inta aan loo dooran dawladda waxa uu ahaa qareen, sidaas awgeedna waxa uu si toos ah u arkayey sida dadka isticmaala xashiishadda loo maxkamadeeyo. Isaga oo wasiir ah, waxa uu si joogto ah ula kulmi jiray dadka shaqadoodii waayay ama dakhligoodii ka dib markii lagu xukumay xashiishad ama wax yar oo daroogo ah oo guriga ku koraya. "Waxaad garatay in haddii aad rabto inaad wax ka beddesho nolosha dadka, waa inaad sameysaa go'aamo geesinimo leh."
Akhri wax dheeraad ah euronews.com (Source, EN)
Fanaanada Selah Sue waxay isticmaashaa microdosing ka hortagga niyad-jabka
Tijaabada xashiishadda: Laga soo bilaabo dib-u-dhigista ilaa dib-u-dhigista
Weed & Coronavirus: hagaha nadaafadda
Boqolaal shirkadood oo Nederland ah ayaa si sharci darro ah ugu tijaabiyay shaqaalaha…